I-Blue Hills Cottage
Indlu esemaphandleni yonke sinombuki zindwendwe onguPamela
Le ndlu yomdibaniso yamaplanga ekuqaleni yayibizwa ngokuba yiClaremont yakhiwa c.1924 lusapho lakwaPayne kwaye iye yabuyiselwa ngothando nguPamela kunye nomama wakhe ongasekhoyo u-Opal.
Uya kuyifumana ibekwe kwiinduli eziluhlaza ze-Beautiful Upper Lansdowne emazantsi eLansdowne Escarpment, iiyure ezi-4 ukuya emantla ukusuka eSydney.
Ifumaneka kwifama esebenzayo yeehektare ezili-160 kunye nemida yeCoorabakh National Park kwindawo yasemaphandleni yase-Upper Lansdowne.
Lo mhlaba ulikhaya lezilwanyana zasendle ezinoluhlu olwahlukileyo lweentlobo zeentaka, izirhubuluzi, izilwanyana ezanyisayo kunye nezinambuzane. Kukwakho nezilwanyana zasefama zasekhaya ezigcinwe kulo mhlaba.
I-Blue Hills Cottage ibonelela ngendawo efanelekileyo yeengcali zendalo, amagcisa kunye nabafoti, ababukeli beentaka, abahamba ematyholweni nabakhweli bamahashe kunye nabo banqwenela ukucima kwisantya esixakekileyo sobomi besixeko.
I-Blue Hills Cottage ifakwe ngokupheleleyo kwaye yindawo efanelekileyo yokuhlala izibini kunye neentsapho ezincinci ngelixa zihlola ubuhle bendalo ukuba le ndawo ikhethekileyo kunye nentlambo ejikelezileyo kufuneka ibonelele.
I-Blue Hills Cottage yindawo entle yeendwendwe ezifuna ukusebenza kude. Intlambo ineTelstra enentsingiselo yefowuni ephathwayo kwaye sinikezela nge-WI-Fi yasimahla yeendwendwe zethu.
Igumbi lokulala eli-1 linebhedi enkulu, iiwodrophu ezimbini, isifuba esisecaleni kwebhedi kunye nezibane kunye nesinxibo esinesipili.
Igumbi lokulala eli-2 linebhedi ephindwe kabini, izibane ezisecaleni kwebhedi isinxibo kunye nengubo. Zombini iibhedi zifakelwe iingubo zombane ngexesha laseBusika.
Zonke iilinen, iingubo, iidoonas, imiqamelo, iitawuli njl.njl zibonelelwa nguMamkeli wakho.
Igumbi elisecaleni lingaphandle, ekuqaleni liyinxalenye yeveranda yangaphakathi enebhedi enye. Ifeni yesilingi kunye neyunithi yokupholisa umoya ayifumaneki kweli gumbi.
Igumbi lokuhlambela lisisiseko kodwa lanele, linesitya sesandla, indlu yangasese, iyunithi yeshawa kunye neekhabhathi ezi-2 zoqobo zokugcina ubukoloniyali.
Igumbi lokuphumla lipholile kwaye lifakwe ngamaqhekeza exesha.
Ukonwatyiswa kwakho kukho ithala leencwadi elincinane elibekwe kwigumbi lokuhlala kunye ne-tv yescreen esicaba kwindawo yokuphumla enonxibelelwano lweVast Satelite ngoko ke ulwamkelo lugqwesileyo.
Kukho isifudumezi somlilo samaplanga kwikona yendawo yokuphumla ebonelela ngokufudumala okupholileyo kwasebusika. Izifudumezi ze-oyile ezi-2 zombane nazo ziyafumaneka ukuba ziyafuneka. Indawo yokuphumla kunye namagumbi okulala ama-2 onke anabalandeli besilingi ngesantya esi-3 kunye neeyunithi zokupholisa zomjikelo opholileyo womoya zifakwe kuwo omabini amagumbi okulala ukuze kuthuthuzeleke eHlobo.
Ikhitshi, nangona isisiseko, ixhotyiswe ngeti, ikofu, ubisi, ioyile kunye neetawuli zephepha zokucoca i-barbeque, iketile yombane, umenzi wekofu, itoaster, ifriji, imicrowave, ipani enkulu yokuqhotsa yombane, i-jaffle sandwich maker, crockpot, crockery. , i-glassware, i-cutlery, izixhobo zekhitshi ezahlukeneyo kunye neembiza.
Kukho iiveranda ezi-3 ezinkulu ezingaphandle ezinezihlalo, zonke zibonelela ngombono owahlukileyo wegadi kunye nepropathi ebanzi.
I-Webber Kettle gas barbeque kunye ne-dual burner-top-top zibekwe kwiveranda yangaphakathi ukuze zisetyenziswe ziindwendwe.
Sinegumbi lomlilo elithandwa ziindwendwe zethu! Nceda ujonge ummkeli wakho ngeenkcukacha.
Ukukhutshwa_Nceda ubhekiselele _ezinye iinkcukacha ukuze uqaphele icandelo_
4.74 · Izimvo eziyi-93
Yiva izandi ezininzi nezahlukeneyo zendalo. Ngamanzi aphuma kwimisinga yeentaba. I-Bower Bird ibiza iqabane. Ukulinganisa inyoni kwihlathi elinemvula. Iinkomo neebhokhwe zibiza amantshontsho azo. Isandi sokududuma kweempuphu njengamahashe ephala phezu kweenduli.
Indawo yokuhlala ephambili ibekwe ngobuchule kwi-200 yeemitha ukusuka kwi-cottage ukuba iindwendwe zifuna enye inkxaso.
Ngenxa ye-Covid-19, sinciphisa naluphi na unxibelelwano oluthe ngqo neendwendwe kude kube esinye isaziso.
Inombolo yomthetho: PID-STRA-14678
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Upper Lansdowne